WRSP - Okpukpe Okpukpe na Ime Mmụọ
The Directory bụ ndepụta ndepụta aha nke WRSP, nke gụnyere usoro ihe omume, mpaghara, na ọrụ mpaghara. Enwere iche indices maka ndenye n'ime Inweta Resources ngalaba nke WRSP.
A na-ahazi WRSP dị ka ndị ọkà mmụta sayensị mba ụwa. WRSP na-eduzi WRSP site na ndị isi nke WRSP Special Projects and Partnerships na ndị ọkà mmụta okpukpe dị iche iche na-enye aka na mmepe WRSP.
UTU EZIOKWU NA ANYỊ
(Director Director: Timothy Miller)
GRIPS MARIAN NA NDỊ GROUPS DEVOTIONAL
(Ndị nduzi Project: Joseph Laycock na Jill Krebs)
UMAKI N'IZI NKE UWA NA UZI AHUIKE
(Ndị nduzi ọrụ: Rebecca Moore, Catherine Wessinger)
MGBE NDỊ MGBE NA-EKWUKWU ỤWA
(Director Project: Massimo Introvigne)
LỌ ILLỌ MMA NA ACLỌ KWESRR AC RWA
(Ndị isi ọrụ ngo: James S. Bielo, John Eade, Ian Reader)
E nwere ọtụtụ ụdị na nkwupụta nke nzukọ na ọrụ ime mmụọ na nke ime mmụọ. A na-akpọ ndị ọkà mmụta nwere nkà a ghọtara na mpaghara ndị a ahọpụtara iji hazie Ụlọ Ọrụ Thematic nke e depụtara n'elu.
RUSSIA NA ESTOPE EUROPE
(Ndị nduzi Project: Dr. Kaarina Aitamurto, Dr. Maija Penttilä)
ỤLỌ NKE ANYỊ NA-AGBANYA NA ANYỊ
(Onye nchịkwa Project: Susan Palmer, John Peterson)
SPIRITUAL & OZIZI OKPUKPE NA ITALY
(Ndị ọrụ nchịkwa: Dr. Stefania Palmisano, Dr. Massimo Introvigne)
ỤLỌ ỤLỌ NA-ECHICHE NA NWA
(Ndị nduzi Project: Carole Cusack, Bernard Doherty)
(Ndị nduzi Project: Ian Reader, Erica Baffelli, Birgit Staemmler)
Ụdị na ọdịnala nke okwu okpukpe na nke ime mmụọ na-adaba na ókèala, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na omenala. Ndị ọkà mmụta nwere nkà a ghọtara na omenala mpaghara ụfọdụ akpọwo ka ha hazie Ihe ndi ozo edepụtara n'elu.
Obodo dị iche iche na United States aghọwanyewanye nke okpukpe na n'ụzọ ime mmụọ na iri afọ ole na ole gara aga. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta emeela nchọpụta nke obodo ndị na-eme ka ọ ghara ịba ụba otú e si ahazi okpukpe na mmekọrịta ime mmụọ ma biri n'otu obodo. Njikọ ndị ahụ Ihe ndi ozo e gosipụtara ebe a.
WRSP ahazila Ajụjụ Interview ebe abụọ ajụjụ ọnụ na WRSP na ajụjụ ọnụ nke ndị ọzọ mgbasa ozi na-agbakọta. A na-ahọrọ ajụjụ ọnụ na ndị ọkà mmụta na ndị ọkachamara ndị ọzọ ka ha nye nghọta na-eme ka profaịlụ dị na WRSP.
Ebe Mgbasa Ozi
Enweela mgbasa ozi mgbasa ozi dị ukwuu nke otu, otu, na ọrụ ndị edere na profaịlụ WRSP. Ebe Mgbasa Ozi achọpụta ma jikọta ọnụ ọgụgụ nke saịtị mgbasa ozi nke ga-abara ndị ọkà mmụta okpukpe uru karịsịa.
Akwụkwọ, Akwụkwọ, Akwụkwọ, na Akụkọ
WRSP na-agbakwunye akụkọ profaịlụ na nke ime mmụọ na Isiokwu & Akwụkwọ site n'inyere ndị ọkà mmụta aka. Ha na-enye ihe onwunwe nke na-emewanye ozi dị na profaịlụ WRSP. Ikwenye ịmepụta ma ọ bụ kesaa ihe ndị a ka dị na ndị dere.
Obodo WRSP na njikọta na vidiyo vidio nke na-eme ma gbakwunye ndenye ederede. Na Njikọ Vidiyo E depụtara ndepụta na ederede na ederede ederede dị mkpa.
Ebe nchekwa Archive
E nwere ọtụtụ ebe ochie na-echekwa ihe gbasara mmasị nke ndị ọkà mmụta na-amụ banyere okpukpe na nke ime mmụọ na oge ochie. Ọtụtụ n'ime ụlọ nchekwa ndị a dị ntakịrị ma bụrụ ndị a na-amaghị. WRSP na-edepụta ihe ndị a Ebe nchekwa Archive dị ka ihe nchọpụta maka ndị ọkà mmụta.
Ọkà mmụta nke ọka mmụta na-enye ajụjụ ọnụ vidiyo Nova Religionio na World Religionions and Spirituality Project na ihe ngosi vidiyo gbasara isiokwu metụtara okpukpe ndị ọzọ na nke ndapụta.